Taovolo - Bezzia | Bezzia
Ny taovolo dia singa iray hafa tena ilaina amin'ny hatsaran'ny vehivavy. Ny fomba nanapahanay na nanamboaranay ny volonay dia hiteny betsaka momba anay ary noho izany antony izany dia tianay ianareo hahafahanareo milaza fa ny volonao dia voadio sy voadio tsara. Ny volon-dohanay ihany koa no ho marika mampiavaka antsika.
Amin'ity fizarana ity dia ho hitanao ireo taovolom-bolo samihafa azon'ny vehivavy anaovana, ary koa toro-hevitra na dingana hahatonga ny volonay hanova fahasamihafana.
Taovolo fampakaram-bady: Ny iray amin'ireo zavatra tsy maintsy arindrao na jerenao amin'ny fotoana kely kokoa dia ny fomba taovolom-panambadiana Te-hitafy amin'ny mariazinao ianao, fitsapana vitsivitsy azonao atao farafahakeliny herinandro alohan'io, mba hahafahanao misafidy mifanaraka amin'izany aorian'ny fahafantaranao hoe iza no ho endrika farany tianao hotratrarina, izany no ampisehoanay anao mirary ny soa indrindra taovolom-panambadiana izay mitafy amin'ity vanim-potoana ity sy amin'ny vanim-potoana hafa, miankina amin'ny fombanao sy ny rivotra tianao homena ny fampakaram-badinao, na fiotazana, maoderina na Retro.
Taovolo ho an'ny vehivavy: Raha te hahatsapa ho tonga lafatra amin'ny fotoana rehetra ianao, ny famaritana ny endrikao dia manasongadina ny endrika sy ny takolaka, tsy misy tsara noho ny taovolo mahery> volo tsara indrindra azonay aseho anao eto, satria miankina amin'ny vanim-potoana sy ny karazan-tarehy izay anananao dia mety mifanaraka tsara kokoa ny sasany taovolo ho an'ny vehivavy kilasika kokoa, na misavoritaka, amin'ny fanapahana tsy mitovy, miaraka amina valahana afovoany na havia. Ho hitanao ato ireo taovolo ho an'ny vehivavy Inona koa no raisina noho ireo mpanao taovolo fantatsika indrindra sy izay mikarakara ny volontsika, manomboka amin'ny fakany ka hatramin'ny farany.
Taovolo lamaody: Miresaka aminao amin'ity habaka ity izahay momba ny taovolo lamaody isan-karazany ho an'ny lahy sy ny vavy azonao atao amin'ny vanim-potoana tsirairay, satria tsy mitovy amin'ny fararano io, noho ny amin'ny fahavaratra na ririnina, koa eto dia afaka manangona fanangonana tsara ianao ny isan-karazany taovolo lamaody fa ny mpanao taovolo malaza indrindra dia sahy maneho amin'ny catwalks lamaody isan-karazany, miaraka amin'ny fomba mahazatra, mofo avo, fanapahana parade ary bangs mahitsy. Ho tianao ny hahafantatra hoe iza ireo taovolo lamaody inona koa no mandeha aminao.
Potika volo: Betsaka amintsika no tsy sahy manao izany indraindray haircuts tena tianay izy ireo, satria eto dia asehonay anao ny tsara indrindra haircuts mba hanananao orientation izay ilain'ny ankamaroany miankina amin'ny vanim-potoana, satria tsara hihety voloMiaraka amin'ny loko mety dia ho ao amin'ny lamaody farany indrindra ianao ary atambatra amin'ny fomba tsy maintsy akanjo. Eto no hahitanao ny tsara indrindra haircuts na ho azy ireo na ho azy ireo, manasongadina sy manantitrantitra ny fiasa mibaribary indrindra amin'ny tarehy.
Toy izany koa, hanome anao tetika izahay hahafahanao manao ny zava-drehetra ao an-trano, hanoro anao izahay ireo vokatra afaka mitazona ny volonao amin'ny toe-javatra tsara indrindra, holazainay aminao ny fironana misy miankina amin'ny vanim-potoana ary hiorina izahay ny tenantsika amin'ny lamaody samihafa asehon'izy ireo.ny olo-malaza eto amintsika, satria maharaka hatrany izy ireo.
Manamboatra ny vaovao sy mandeha tsikelikely, dia hasehonay anao ny fomba hanarahana azy mba hahitana lafatra.
Ahoana ny famolahana volo fohy
Te hiloka amin'ny fiovan'ny endrika ve ianao nefa tsy lava volo? Tsy maninona izany, satria miaraka amin'ny volo ...
ny Susana Garcia hace 2 volana .
Ny volo tsara dia matetika manana olana maro ary ny iray amin'izany dia ny tsy fananany be loatra. Rehefa mitranga izany…
Ny volon-doha misy sosona no tokony hananana vaovao
Ny hihety volo sosona dia mijanona indray. Rehefa afaka kelikely, ny taovolo an'ny ...
Ahoana no hikolokoloana volo misongadina
Ny volo dia iray amin'ireo mamaritra antsika indrindra ary tena tiantsika indrindra, fa tsy hoe tokony ...
Taovolo mba hahatongavana lafatra amin'ity lohataona ity
Ny fanovana ny taovolo sy ny volonao dia mety ho fomba tsara hanombohana. Ny fanovana dia ...
Fironana volo mavokely eny sa tsia?
Toa miverina hatrany hatrany ny fironana volo mavokely. Loko volo manaitra, mamaky tany ...
Ny bobaka blunt dia ny volon-doha vaovao
ny Susana Garcia hace 3 volana .
Indraindray misy fanapahana vaovao misy anarana izay sarotra amintsika nefa vetivety dia lasa fironana ...
Taovolo mora mandeha miasa isan'andro
ny Susana Garcia hace 4 volana .
Indraindray rehefa mandeha miasa isika dia tsy manam-potoana firy hiomanana, noho izany dia misafidy hevitra tsotra amin'ny ...
Ahoana ny fomba fanaovana dreadlocks
ny Susana godoy hace 5 volana .
Fantatrao ve ny fomba fanaovana dreadlocks? Raha iray amin'ireo taovolo tianao indrindra izy ary te hanomboka hampiseho azy, dia ao amin'ny ...
Fomba fanodinkodinana ny tapakila: Soraty ireto toro-hevitra ireto!
Ny tapakila fanafenana dia mety ho mora kokoa noho ny eritreretintsika. Ny marina dia rehefa nanomboka nahatsikaritra azy ireo isika, maro ...
Volo fohy ho an'ity vanim-potoana ity
ny Susana Garcia hace 5 volana .
Raha nanana volo lava ianao nandritra ny fotoana fohy ary te hanomboka amin'ny taona vaovao ny taona, dia ...
Peroxyde hidrôzenina amin'ny volo, mahatsara ary maharatsy
Impiry no atoro ny mandoko
Ahoana ny fanesorana ny fofon'ny sigara amin'ny volonao
Fomba fampiasana aloe vera amin'ny volo
Fomba fanalana menaka amin'ny volo, fika tena miasa
Karazana volo mahitsy ary iza no safidiana
Fomba fanamainana volo madio
Volondavenona mainty, miverina amin'ny lamaody